Ungaqhubeka kanjani nempilo ngemuva kokushonelwa - Sendoff Funeral App
Ungaqhubeka kanjani nempilo ngemuva kokushonelwa
Ngabe uzibuza ukuthi ungalunqoba kanjani usizi nosizi lokulahlekelwa othandekayo? Noma ungangena kanjani esigabeni esilandelayo sempilo yakho? Ukuphatha amakhulu wezinto eza nokupakisha emva kwempilo?
Kunzima. Izimo ozizwa sengathi umhlaba kufanele ume kuze kube yilapho usukulungele ukubhekana. Sibe lapho futhi izinhliziyo zethu zikuwe ngalesi sikhathi sokuzama usizi nokulungiswa kwempilo.
Sithole ukuthi kuyasiza ukugxila ezintweni ezibonakalayo ongazenza futhi uzifinyelele kulesi sigaba futhi ube nezeluleko ezizosiza:
Impilo ngemuva kokushonelwa
Impilo ngaphandle kwesithandwa sakho akuyona into umuntu ayicabangayo noma ajwayele ukuyilungiselela. Kungaba yinto entsha enzima, ngakho-ke Nazi ezinye izeluleko zokukusiza uguqule:
# 1. Thatha Izinyathelo Ezincane
Ngemuva kokulahleka okukhulu, ukufunda ukuphinda uphile kunzima. Ungahle ungabi nesifiso sokwenza noma yini noma uye ndawo.
Kodwa, ngezinsuku ezithile, uzozizwa ungcono kunezinye izinsuku. Ngakho-ke, kubalulekile ukuvumela inqubo yosizi ukuba iqhubeke.
Imizwa yecala, izinhlungu, nokudabuka kujwayelekile ngesikhathi sokuphola kwakho. Lokhu kungenxa yokuthi uthola ngcono kuphela ngemuva kokuthi udlule emizweni.
Kufanele uvumele ukuthi uzizwe ukuthi uzizwa unjani futhi uqaphele ukuthi akukho ukushesha kokuzizwa “kujwayelekile” futhi. Lapho isikhathi sesilungile, uzophola futhi ilanga lizokhanya futhi.
Uma uzizwa udabukile, uphansi noma phansi khumbula ukuthi awuwedwa, abangane bomndeni, amaqembu okusekela nezinhlelo zokutakula angakusiza ukuthi udlule kulokhu.
# 2. Phinda wenze Injabulo Yakho
Siyaqonda ukuthi othandekayo wakho kungenzeka ukuthi ube ngumthombo omuhle wenjabulo kuwe. Ngenxa yalokhu, lokhu kulahleka kukushiye ucekeceke futhi uphukile.
Akunakwenzeka ukugcwalisa isikhala abasishiyile. Kepha akudingeki ugcwalise isikhala. Ungathola izinto ezintsha zokuthola injabulo kuzo.
Ungachitha isikhathi esithe xaxa nomndeni, uthathe umdlalo omusha noma ufunde ukudlala insimbi.
Le misebenzi iphilile kuwe futhi izokusiza ukuthi uphilise. Noma kunjalo, kufanele ube nesineke ngenqubo yakho yokupholisa.
Ukuhlala uzungeze abantu abakukhathalelayo kuzohamba ibanga elide. Ukulungisa injabulo yakho kungahle kufake phakathi ukuthatha ezinye izindima ezigcwaliswe othandekayo wakho. Uma ungakhululekile ukubuyela endlini engenalutho, ungathola isilwane. Umdlwane omusha noma kitten kungaba ngumthombo omuhle wenduduzo futhi ungasusa ingqondo yakho ezintweni.
# 3. Ake isikhathi sikunakekele
Impilo ingaba nesizungu ngemuva kokuthi izinsizakalo zomngcwabo seziqediwe. Izinto ngeke ziphinde zifane, kepha ukuphulukisa nokuphila futhi kungenzeka.
Kodwa-ke, kwesinye isikhathi, ungazizwa sengathi awusoze wajabula futhi. Ngenkathi lo umuzwa ojwayelekile, kunokukhanya ekugcineni komhubhe.
Empeleni, uzozizwa ujabule futhi. Okudingayo manje ukuvumela isikhathi ukuba siqhubeke.
Ukuvumela isikhathi sokupholisa akusho ukuthi uzokhohlwa othandekayo wakho noma kusho ukuthi akubalulekile. Izinkumbulo zabo ziyathandeka kuwe futhi bazohlala benjalo.
Phatha izinkumbulo zabo njengesipho okufanele usazise. Ukwenza lokhu kubalulekile ngoba ukufa ngeke kususe lezi zinkumbulo.
Khumbula ukuthi inhloso akuyona ukukhohlwa othandekayo wakho. Kufika lapho ungabakhumbula khona ngenhliziyo yonke, ngaphandle kosizi futhi ngaphandle kokubeka impilo yakho ikhefu.
# 4. Phuma ngaphezulu
Ukuzulazula impilo yakho yenhlalo ngemuva kohlelo lomngcwabo kunzima, ngokungangabazeki. Ukuya emicimbini yomphakathi, ukuzijabulisa, ngisho nokuhleka nokuhlekisa kungabonakala kuyinqaba.
Kodwa-ke, kufanele ukhumbule ukuthi ukuxhumana nabanye abantu kuzokusiza uqhubeke. Akukho ukushesha, ngoba kubalulekile ukuthi uhambe ngejubane lakho.
Nazi izinto ongazenza ukubuyela esikhaleni senhlalo:
Bamba isidlo sakusihlwa futhi ube nabangane ngaphezulu.
Bheka imisebenzi yeqembu. Lapho abantu abaningi obazungezile, kulula kakhulu ukubalapha.Yenza abangane abasha.
Thola umsebenzi omnandi futhi uzijwayeze nabantu abanezintshisakalo ezifanayo.
Le misebenzi iyindlela yokuzinakekela ebalulekile kuwe. Isikhathi esihle sokuzivulela okuhlangenwe nakho okusha.
Ungazizwa unecala lokuhleka ihlaya noma ukujabulela ukuvakasha komngane. Kubalulekile ukujwayela impilo ngaphandle kwesithandwa sakho. Bangafuna ukuthi ujabule noma ungekho.
Ukubhekana nokushonelwa kungadonsa, kube nzima futhi kube nzima. Ngakho-ke kufanele ufinyelele futhi uthathe lonke usizo ongaluthola ukuze uqhubekele phambili nempilo yakho.
Khumbula ukuthi ukubhekana nokuthola usizi kuyingxenye yemvelo yempilo futhi uphilile ngokuphelele. Umuntu omthandayo kungenzeka ukuthi udlulile kepha usalapha. “Ungakhali ngoba sekuphelile. Ukumamatheka ngoba kwenzekile ”